Abathengisi abaningi basebenzisa ingxenye eyodwa yobuchwepheshe abayijabulelayo noma abenethezekile ngayo futhi bangazinaki ezinye. Ngingumsekeli omkhulu we-automation futhi umakethi usebenzisa imilayezo yakhe nganoma iyiphi indlela, ukwakheka, noma ifomu - ngendlela yokuthi ayikaze ilimaze imizamo yabo yokumaketha.
Hlala Ufanele - hlala uqonde futhi, noma ngabe ulingeka kangakanani, zama ukuqinisekisa ukuthi uhlala ukhuluma namakhasimende akho noma amathemba akho. Lokhu kuzokuzuzela igunya nedumela eliqinile ngokushesha okukhulu kunokuthi weqe uzungeze noma wehluke kumlayezo wakho.
Shicilela Njalo - kunamathemba namakhasimende laphaya afuna okuqukethwe kwakho, kepha angazi ukuthi kukhona. Thumela izindatshana kwamanye amasevisi, ukukhishwa kwabezindaba, beka izixhumanisi kwizikhombisi-ndlela, engeza ezingxoxweni ezinkundleni ezifanele, khuthaza ama-athikili akho ngamathuluzi okubekisa omphakathi, uthumele kumasayithi ezindaba, ama-wikis, njll. Yiba yi-blogger yezivakashi futhi uphawule ngamanye amabhulogi anezixhumanisi kokuqukethwe kwakho. Faka izixhumanisi kuma-invoice akho, amasiginesha wakho we-imeyili, amakhadi akho ebhizinisi… yonke indawo!
Ufake umsebenzi onzima futhi wabhala okuningi okuqukethwe okufanele. Manje sebenzela ukuqinisekisa ukuthi okuqukethwe kuthola ukunakwa okulifanele!